မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်: အထွန်းမှာ ရပ်တဲ့ နေသူရိန်
အထွန်းမှာ ရပ်တဲ့ နေသူရိန်
စာရေးသူ နယ်မှာနေစဉ်အခါက တပည့်ဖြစ်သူ အချို့ ရှိပါသည်။ ထိုသူတို့အထဲတွင် မောင်သက်ဦး ဆိုသော ကလေးသည် ပညာကို အလွန် ရိုရိုသေသေဖြင့် လေ့လာလိုက်စားသည့်သူ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်က ခေါ်ခွင့်မပြုသဖြင့် ဆရာဟု သူမခေါ်သည့်တိုင်အောင် ..သူသည်ကျွန်တော့်ထံတွင် တပည့် ကောင်း တစ်ဦးပမာ သင်ယူသွားခဲ့သူဖြစ်သည်။
သူ ကျွန်တော့်ထံတွင် ဗေဒင်ပညာ စတင်သင်ကြားဖြစ်သည့် အကြောင်းရင်းကလည်း ရှိသည်။ ထိုစဉ်က စာရေးသူတို့ နေထိုင်ရာ ခြံနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် … အထည်စက်ရုံကြီးတစ်ခု ရှိသည်။ သူသည် ထိုစက်ရုံတွင် စာရင်းကိုင် မန်နေဂျာလေး ဖြစ်သည်။ တစ်ရက်ကြီးက သူ ကျွန်တော့်ဆီ ဗေဒင်လာ မေးသည်။ တွက်စစ်ကြည့်ပြီး … မြင်ရသည့် အနေအထားက ..မကြာမီ အလုပ်ပြုတ်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်းများ သာ မြင်နေခဲ့ရ၏။ လက်ရှိအနေအထားအရ သည်ဟောကိန်းဟောပေးလိုက်သည့်အခါ .. သူ့အနေဖြင့် လက်မခံချင်အောင် ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ဟုတ်သည်လေ။ သူ့ကို စက်ရုံပိုင်ရှင် သူဌေး ကိုယ်တိုင်က သဘောကျသည်။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေနေသည့်အလုပ်။
ခက်တာက ကျွန်တော်တို့ ဗေဒင်ပညာမှာကလည်း ကိန်းအရ ..တွေ့လျှင် ဟောပေးရမည်သာ ဖြစ်သည်။ ချန်ထားခဲ့၍ မဖြစ်။ သူ၏ လက်ရှိအနေအထား အဆင်ပြေမှုတွေကို ကျွန်တော်ငဲ့ပြီး မဟောပဲနေလို့ မရ။ မှတ်မိသမျှ … ပြန်ပြောရပါမူ…သူသည် သောကြာသား အဓိပတိဖွား ဖြစ်သည်။ နာမည်မှာ အဓိပတိမှ အထွန်းသို့ သွားသော အမည်မျိုးဖြစ်သည်။ သက်ရောက်က စနေသက်ရောက်။ မူလမဟာဘုတ်ရှိ ရာဇ ဌာနရှိ ဂြိုဟ်၏ သက်ရောက်။
ကဲ .. ဆန်းတိုင်ထူမလား၊ မဟာဘုတ်တိုင်ထူမလား။ ထူကြပေတော့။ ဟောကြပေတော့။ စနေ သက်ရောက် ဖြစ်သဖြင့် အဆိုးလောကဓံဟု လွယ်လွယ်လေး ဟောမလား။ မလုပ်လေနဲ့ ။ စနေ သက်ရောက်ထဲမှာ ထီပေါက်သွားသော၊ ရာထူးဒိုင်းကနဲ ထိုးတက်သွားသော ၊ အမွေရသွားသော သူတွေ တစ်ပုံတစ်ခေါင်း ရှိသည်။ မဟာဘုတ်နှင့် ကြည့်မလား ။ သက်ရောက်စနေသည် အညွန့်ဂြိုဟ် ၊ ရာဇတွင် ရပ်သည့်ဂြိုဟ် ။ ဟောမယ်ဆို အကောင်းချည်း ။ ဆန်းတိုင်ထူမလား။ သောကြာမွေးနံ တန်းစီးမှာ ရပ်ပြီး ကောဇာ ၀ရ ဂြိုဟ် လာကပ်ထားသည့် ….အနေအထား။ အို ….ရှုပ်ပါတယ်။ ထွေကာလီကာ သပွတ်အူ အစထုတ် …ခေါင်းရှုပ်ခံမနေတော့နဲ့ … ရိုးရိုးလေးနဲ့ရှင်းအောင် ….မဟာဘုတ် တစ်ခုထဲ စကြည့် လိုက်ရအောင် …. ။
ကဲ….သူရဲ့ မူလမဟာဘုတ် ဇာတာခွင်က ၁၃၃၉ ခုနှစ် နတ်တော်လဆန်း (၁၃) ရက် သောကြာ နေ့ ဖြစ်တာမို့ နှစ်ခုကြွင်း မဟာဘုတ် ဇာတာခွင် ဖြစ်ပြီး …မွေးနံသောကြာဖြစ်ခြင်းကြောင့် …သူသည် အဓိပတိဖွားလည်းဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ။ ….. အမြင်သာဆုံးအနေအထားဖြစ်သော အလုပ်အကိုင် နှင့် အသက်မွေးမှု စီးပွားရေးရာ တို့တွင် အဓိကအခေါင်အချုပ်ဖြစ်သော တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် အနေအထားကို ကြည့်ပါ။ တနင်္ဂနွေသည် အထွန်း ဌာနတွင် ရပ်တည်ထားကြောင်း လွယ်ကူထင်ရှားစွာ တွေ့ရမည်။
ဒါဖြင့် ကောင်းတာပေါ့ ၊ အထွန်းမှာ တနင်္ဂနွေ ရပ်တော့ အသက်မွေးမှု အလုပ်အကိုင် ကောင်းကျိုးပေးမည် ဟု တော်တော်များများက အလွယ်တစ်ကူ ကောက်ချက်ချပေလိမ့်မည်။့ မှန်ကောင်းမှန်မည်။ သို့သော် မှန်ပုံခြင်းကား မတူ။
ဇာတာရှင်သည် သောကြာသား အဓိပတိဖွား ဖြစ်နေသည်။ ပင်ကိုယ်သဘာဝ အားဖြင့် ပင်လျှင်…တနင်္ဂနွေသည် အထွန်းဌာန တွင် ရပ်တည်ထားသည့်အခါ …အသက်မွေးမှု ကျယ်ပြန့်စွာ အောင်မြင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ခြင်း၊ ထင်ရှားကျော်ကြားသော အသိမှတ်ပြုခံရခြင်း၊ အထွဋ်အထိပ် အရိုက် အရာကို ဆက်ခံရခြင်း ဟူသည့် ကံတရား မျိုးကို ဖွဲ့စည်းလာသည်။ သို့သော်…..နှစ်ခုကြွင်းဖွားတိုင်း ကို ထိုကံသည် ကောင်းစွာသော သက်ရောက်မှု ပေးသည်ကား လုံးဝ မဟုတ်ပေ။ ဆိုင်ရာ နေ့နံ အလိုက် ခွဲခြားပြီး သက်ရောက်စေ၏။ ယင်းအချက်ကို မသိသေးသမျှ မဟာဘုတ် ပညာ၏ တံခါးဝကို ချဉ်းကပ်နိုင်ဦးမည်ပင် မဟုတ်ပေ။
အထက်ပါ ဇာတာရှင် သောကြာသားသမီး အဓိပတိဖွား တို့အတွက်မူ အဆိုပါ တနင်္ဂနွေသည် အောက်ပါ ကဲ့သို့သော အကျိုးအပြစ်များ ပေးစွမ်းနိုင်၏။
တနင်္ဂနွေ (အထွန်း) + သောကြာသားသမီး(အဓိပတိဖွား)
ကောင်းကျိုး = ကောင်းသော အသက်မွေးမှု ဆက်ခံခွင့်များ ရရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းအမွေ၊ အသက်မွေးမှု အမွေအနှစ်များ လက်ဆင့်ကမ်း ပိုင်ဆိုင်ရရှိခြင်း၊ နာမည်ဂုဏ်သတင်း ဆက်လက်ဆက်ခံ ထွန်းတောက်ခွင့် ရရှိခြင်း၊ (ဥပမာ …ဘယ်ဆရာ၏ တပည့် …စသည်) ၊ သူတစ်ပါး၏ အလုပ်အကိုင်ကို ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးရင်း ….မိမိပိုင်လုပ်ငန်းကဲ့သို့ အကြီးအကဲ တစ်ဦးအဖြစ် နေရာ ကျယ်ပြန့်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရရှိစေခြင်း။ ဘ၀နောက်ဆုံးချိန် ဇာပန အခမ်းအနား စည်ကား သိုက်မြိုက် စေခြင်း။
ဆိုးကျိုး = အလုပ်ပြုတ်ခြင်း (ပြုတ်သည်မှ ဟိုးလေးတစ်ကျော် ထင်ထင်ရှားရှား ပြုတ်ခြင်း၊ လူသိ ထင်ရှား တရားဝင် အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်ရခြင်း၊ အရိုးအဆစ် ၊ နှလုံး၊ ဦးခေါင်းပိုင်း နှင့် အာရုံကြော ဆိုင်ရာ (ပြန့်နှံ့ ပွားများ စေတတ်သော သဘော ပါသည့် ဝေဒနာမျိုး) ကျရောက်စေနိုင်ခြင်း။
( အထွန်းဌာန တွင် ရပ်တည်သော တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် သည် သောကြာသားသမီးများ အတွက် အထက်ပါ ကဲ့သို့သော ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ် အ၀၀ ကိုပေး နိုင်သည် ဟု ….မောင်ဖုန်း ဆို၏။ မှန်မမှန် ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ ကာယကံရှင်များ တိုက်စစ် အဖြေရှာ သတိချပ်ကြည့်ကြလေကုန်။ ယခုနေရာတွင် ..စာဖတ်သူ အများအပြား အဖို့ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် …အထွန်းဌာန တွင် ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ် သဘာဝ နှစ်ပါး စလုံးကို တွေ့ရှိရသနည်းဟု ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်နေနိုင်ပေသည်။ အားလုံးသော စာဖတ်သူများကို တိုက်တွန်း လိုသည်မှာ …..နေ့နံအသီးသီးအလိုက် ဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်အမျိုးမျိုးတို့သည် ရှေးကနဦးကပင်လျှင် အကျိုး အပြစ် သဘာဝ အသီးသီး ခွဲခြားပေးထားသည်သာ ဖြစ်ကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်အောင် ကြိုးစားကြစေလိုပါသည်။ ယင်းအချက်ကို ပိုမိုမြင်သာ အောင် ဥပမာ တစ်ခု ပြဆိုပါမည်။
ဆိုပါစို့ ….. တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် သည် ..စနေသားသမီး နှင့် ကြာသာပတေး သားသမီး နှစ်ဦး တွင် … အကျိုး အပြစ် စတင်ခွဲခြားပေးပုံခြင်း မတူညီပေ။ စနေသားသမီးအတွက် ….တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်သည် အကူအညီ ပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ ကို လှုံ့ဆော်ပေးသော အာနိသင်ပြုပြီး၊ ကြာသာပတေးသားသမီးများ အတွက် မူ အနာရောဂါ နှင့် မင်းပြစ်မင်းဒဏ် သင့်မှုကို အာနိသင် ပြုပေးနိုင်ပေသည်။
ယင်းအချက်များသည် ကျွန်တော်အနေနှင့် အသစ်အဆန်း ထွင်ထားသည်များလည်း မဟုတ်ပေ။ အများသူငါ နည်းတူ လေ့လာလိုက်စားခဲ့ရသော ကာရကများ၊ မိတ်/ရန်၊ ဂြဟကာရက သဘော၊ ပရိဝါရ ဝေဖန်မှု၊ စသည့်နည်းစနစ်များတွင် ထိုအရာများ အားလုံးပါဝင်နေသည်သာ ဖြစ်ပြီး ၊ ခက်သည်ကတော့ ….အများစုမှာ ယင်းအချက်များကို ဆက်စပ်ချိတ်ဆက် တွေးယူသိမြင်နိုင်စွမ်း မရှိကြခြင်း ဖြစ်၏။
အနှစ်ပြန်ချုပ်ရပါမူ …မဟာဘုတ်ခွင် တွင် မကြည့်ရှုရသေးမီ မှာပင် ဆိုင်ရာနေ့နံ အသီးသီးအလိုက် .. ဂြိုဟ်အသီးသီးတို့သည် …မတူညီသော ကွဲပြားသည့် အာနိသင်များဖြင့် ရပ်တည်နေကြောင်း သိရှိနေရန် အမှန်တစ်ကယ် လိုအပ်ပေသည်။ ပြီးမှ တစ်ဆင့်တက်ကာ …မဟာဘုတ်ခွင်တွင် ထည့်သွင်း ချိန်ဆ ကြည့်ရမည်။ အထွန်းတွင် ရပ်တိုင်းလည်း ကောင်းပြီဟု မထင်နှင့်။ မရဏတွင် ရပ်တိုင်းလည်း ဆိုးသည်ဟု အလွယ်တစ်ကူ မဆုံးဖြတ်အပ်။
နှစ်ခုကြွင်းဖွား စနေသား တစ်ဦးအတွက် အထွန်းဌာန တွင် ရပ်တည်နေသော တနင်္ဂနွေသည် ဦးဆောင် ဦးရွက်ပြု အကျိုးစီးပွား ရှာဖွေခွင့် ရရှိခြင်းမျိုးကို မုချ ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ၊ ယင်းနှစ်ခုကြွင်းဖွား ကြာသပတေး သားသမီးတစ်ဦး အတွက်မူ…ဂုဏ်သရေရှိ ၊ နာမည်ကျော်ကြားသော အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ် တို့၏ ရန်ပြုမှု ခံရခြင်း နှင့် အရိုးအဆစ်ယောင်ယမ်းခြင်း ၊ ဦးနှောက်အမှေးပါး ယောင်ယမ်းခြင်း ကဲ့သို့ ဝေဒနာမျိုး ခံစားရစေနိုင်ကြောင်း ….စသည်ဖြင့် ခွဲခြားသိနိုင်ရန် ..လိုအပ်ပေသည်
ရှိစေတော့။ ယင်းအဆင့်အထိ အသေးစိတ်ခွဲခြားနားလည်နိုင်ရန်မှာ ယခုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် မျှ နှင့် မဖြစ်နိုင်။ သုိ့ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ….စာဖတ်သူအများ နားလည် နိုင်စေရန် ပက္ခကြည့်နည်း ကို ဆက်လက် ဖော်ပြ ပေးသွားပါမည်။ အောက်တွင် ဆက်လက်လေ့လာပါ။
အထက်ပါဇာတာရှင် သောကြာသား အဓိပတိဖွား ၏ ဇာတာတွင် …ပုတိဌာနရှိ အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် အထွန်းဌာန ရှိ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်အား ပက္ခပြုထားကြောင်း တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းအချက်ကို အဖြေရှာကြည့်မည် ဆိုပါက ………
(၁) အလုပ်အကိုင် နှင့် အသက်မွေးမှု ကို အစိုးရသော တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် အား ပက္ခပြုသော ဂြိုဟ်အမျိုးအစား = အင်္ဂါဂြိုဟ်
(၂) အင်္ဂါဂြိုဟ် ရပ်တည်ရာဌာန = ပုတိဌာန
အဖြစ် တွေ့ရှိရမည်။ သို့ဆိုလျှင် …. နှစ်ခုကြွင်းဖွား တို့၏ အသက်မွေးမှု ကို ပျက်ဆီးစေသော သို့တည်း မဟုတ် အားနဲနိမ့်ပါးစေနိုင်သော အချင်းအရာမှာ …အင်္ဂါဂြိုဟ် နှင့် ပုတိဌာန သာ ဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်ပေပြီ။ ကောင်းပြီ ။ မည်ကဲ့သို့ အဟောထုတ်ရမည်နည်း။
အင်္ဂါဂြိုဟ် ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ..လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမှ လူများ ၊ အင်္ဂါသားသမီးများ၊ အင်္ဂါနံ နာမည်ရှင်များ သည် နှစ်ခုကြွင်းဖွား ဇာတာရှင်တို့၏ အသက်မွေးမှုကို ထိခိုက်အားနဲစေနိုင်သည်။ မီး နှင့် စပ်လျဉ်းသော နေရာများ၊ လက်နက်ကိရိယာ ထားသိုရာ နေရာများ သည်လည်း အသက်မွေးမှုကို အား နည်းစေနိုင်ကြောင်း သိနိုင်သည်။
အဆိုပါ အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် ပုတိဌာနတွင် ရပ်တည် နေခြင်းဖြစ်သည်ကို ဆက်လက်တွေးတော သုံးသပ် ကြည့်ပါ။ ပုတိဌာနသည် အတွင်းအပြင် ခွဲခြားရာတွင် အတွင်းဘက်ဌာနများကို အစိုးရသည်။ ၄င်းအပြင် ..ရေနှင့် နီးစပ်သော နေရာများ၊ အမျိုးသမီးများ စုဝေးရာ၊ အိမ်ရှင်မ ၏ ပိုင်နက်နယ်ပယ်၊ နှင့် ကလေးငယ်များ ရှိရာဌာန ကို အစိုးရသည်။
ှူအင်္ဂါဂြိုဟ် နှင့် ပုတိဌာန ပေါင်းစပ်ကြည့်ရှုပါက အဖြေအများအပြား ထွက်လာမည်ဖြစ်သော်လည်း အများ အားဖြင့် ယင်းသည် မီးဖိုချောင် နှင့် အိမ်နောက်ဖေး လောင်စာများ ထားသိုရာ ကို အဓိကဖော်ပြသည်။ အင်္ဂါ၏ မီးကို အစိုးရမှုနှင့် ပုတိဌာန ၏ အမျိုးသမီးများ နှင့် ဆိုင်သော နေရာ ကိုအစိုးရမှု တို့ ပေါင်းစပ် ခြင်းအားဖြင့် မီးဖိုချောင် (၀ါ) မီးကို အသုံးပြုပြီး ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်ရာ ဌာန ကို ဖော်ညွှန်း လွှမ်းမိုးနေခြင်း ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ …အဆင့်ဆင့် ချိတ်ဆက်ပုံဖော်လာသော အချင်းအရာများသည် နှစ်ခုကြွင်းဖွားတို့၏ အသက်မွေးမှု ကံဇာတာကို အားနည်းစေသော အဓိကအကြောင်းတရားများ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါလျှင် …………………
ယခုဇာတာရှင် သောကြာသား အဓိပတိဖွား မောင်သက်ဦး သည်ကော ….အဘယ်ကဲ့သို့ တွေ့ကြုံ ရင်ဆိုင်ရပါသနည်း။
မောင်သက်ဦး ကား အဆိုပါကံနှင့် ပိုမိုကြုံထိုက်စွာ၏။ အဘယ်ကြောင့်နည်း ။ ၄င်း၏ အမည်တွင် အလွန် အရေးပါလှသော နာမည်အဖျားစာလုံးသည် တနင်္ဂနွေနံ(ဦး) ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ……အဆိုပါ ပက္ခ လမ်းကြောင်းအရ ပေါ်ပေါက်လာမည့် ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်အ၀၀ တို့သည် ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးတွင် မုချ အဖန်ဖန် ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်း ရမည့် ကံတရား တို့ ဖြစ်လာလေသည်။
ဆောင်းပါး အစတွင် ကျွန်တော် ဟောဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း များမကြာမီ …သင်္ကြန် ကျော်ပြီး နှစ်သစ်ဦးပိုင်း မှာပင် မောင်သက်ဦး အလုပ်ပြုတ် ပါလေတော့သည်။ ပြုတ်လာလာခြင်းမှာပင် ထိုစက်ရုံနှင့် မျက်နှာ ခြင်းဆိုင် တွင်နေထိုင်နေသော ကျွန်တော့်ဆီကို မောင်သက်ဦး စက်ဘီးကလေးနှင့် ရောက်လာပါ တော့သည်။
အစ်ကိုရေ ….အစ်ကိုဟောတဲ့အတိုင်းပဲဗျို့ ။ သင်္ကြန်ကျော်ပြီးရင် ဂရုစိုက် အလုပ်ပြုတ်ကိန်း ရှိတယ် ဆိုတာ..အခု အလုပ်ပြုတ်လာပြီ အစ်ကိုရေ။
သူ့အမော ၊ သူ့မျက်နှာ၊ သူ့မခံချင်မှု အ၀၀ ကို ကျွန်တော်ခံစားနားလည် ပါသည်။
ပြုတ်စရာ အကြောင်းရှိတော့လည်း ပြုတ်စရာ အကျိုး ဖြစ်တာပေါ့ကွာ၊ လာကွာ ..ထိုင် ..လုပ်စမ်းပါဦး၊ ဘယ်လိုများ ဖြစ်တုန်း။ စသည်ဖြင့်….သူရင်ဖွင့်သည်များကို နားထောင်ပေးခဲ့ရပါသည်။ ဖြစ်ပုံက……………………
မောင်သက်ဦးက အလုပ်ထဲတွင် မိန်းကလေးများ နှင့်လည်း ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေသည်။ နှာဘူးကျလို့ ဘာလို့ ဆိုတာမျိုးမဟုတ်။ မောင်သက်ဦးကိုယ်တိုင်က နွဲ့နွဲ့ပါးပါး နှင့် စကားပြောဆို ညင်သာသည်။ အမြဲ ပြုံးပြုံးလေး နှင့် ပျော်ပျော်နေတတ်သည်။ ဆိုတော့ ….အလုပ်သမလေးများ နှင့်သော်လည်းကောင်း၊ အလုပ်ရှင် သူဌေးမင်း အိမ်မှ အိမ်ဖော်မိန်းကလေးများနှင့် သော်လည်းကောင်း ခင်မင်ရင်းနှီးသည်။ ဒါကို ……. ကြည့်မရ မျက်မုန်းကျိုး ၊ မျက်စိပိုးဝင် ခပ်ချဉ်ချဉ် ဖြစ်နေသူ တစ်ဦးကလည်း ရှိသည်။ ထိုသူကား…..အခြားမဟုတ်။
အလုပ်ရှင်သူဌေးမင်း ၏ ဖခမည်းတော် (အငြိမ်းစား အရာရှိဟောင်း ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး) ၏ နောက်တော်ပါ တပည့်ကြီး ဖြစ်သူ ရဲဘော်ဟောင်းကြီး တစ်ဦး ပင်တည်း။ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း မှ ဆရာဖြစ်သူ အငြိမ်းစား ယူလာတော့ များမကြာမီ တပည့်ကြီးဖြစ်သူလည်း ဆရာသမား နောက် …ပြင်ပလောက အထိ ကောက်ကောက် ပါခဲ့ပုံရသည်။ ထို ရဲဘောင်းဟောင်း ကြီးကား …မောင်သက်ဦးကို အစ မှ အဆုံး လုံးဝ ကြည့်မရ ဖြစ်နေသည့်သူ။
တစ်နေ့….မောင်သက်ဦး …အလုပ်ရှင်သူဌေးမင်း၏ အိမ်မှ မီးဖိုချောင်ထဲတွင် ချက်ပြုတ်နေသော အိမ်ဖော် မလေးများ နှင့် စကားစမြည် ပြောဆို ရယ်မောနေသည်။ ယင်းအခြေအနေတွင် ကိုရွှေရဲဘော် ဟောင်းကြီးက ၀င်ဟန့်တားသည်။ အပြစ်တင်သည်။ ကြိမ်းမောင်းသည်။ စကားအခြေအတင် များကြသည်။ အကျဉ်းချုံး လိုက်တော့ ထိုပြဿနာက အသေးလေးကနေ ကြီးလာသည်။ ကိုရွှေ ရဲဘော်ဟောင်းကြီးက …မောင်သက်ဦးကို အလုပ်ထုတ်ပေးဖို့…သူဌေးမင်း၏ ဖခမည်းတော် သူ၏ ဆရာရင်းကို အရေးဆိုသည်။ မောင်သက်ဦး အလုပ်မထွက်လျှင် သူထွက်မည်ဟု အပြတ်တင်းပြသည်။
ခက်တာက မောင်သက်ဦးမှာက အလုပ်ထဲတွင် အပြစ်တစ်ခုမှ မရှိ။ ဘာပြဿနာမှ မှန်ဘီးလူးထောက် ရှာလို့မရ။ အလုပ်ကြိုးစားလို့ သူဌေးကိုယ်တိုင်ကလည်း သဘောကျသည့်သူ ။ ဒီတော့ …. အလုပ် ထုတ်ရ ခက်နေသည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူ……ပေါ့လေ။
သူဌေးက သူဌေးအဖေကို မလွန်ဆန်နိုင်။ သူဌေးအဖေကလည်း …သူတပည့်ကျော် ရဲဘော်ဟောင်းကြီး အလုပ် ထွက်သွားပြီး သူ့အပါးမှ ခွာသွားမည်ကို မလိုလား ။ ရဲဘော်ဟောင်းကြီးကလည်း သက်ဦးကို အလုပ်ထုတ်ကို ထုတ်မှ ၊ မထုတ်ရင် သူဆက်မလုပ် တဲ့။ ပြတ်သည်။ သည်တော့လည်း…………….ကဲ……..သွားပေတော့ မောင်သက်ဦး ။ ရော့ နှစ်လစာ ..သုံးလစာ ။ စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ ။ မတတ်သာလို့ပါ။ စသည်ဖြင့် …..မောင်သက်ဦး၏ အသက်မွေးအလုပ် ..နိဂုံး ချုပ်ခဲ့ရခြင်းတည့်။
မောင်သက်ဦး၏ ဖြစ်စဉ်တွင် သေချာဆန်းစစ်ကြည့်သော် ….လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းမှ အငြိမ်းစား ယူလာခဲ့သော….ထိုရဲဘော်ဟောင်းကြီးသည် လည်းကောင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရာ မီးဖိုချောင် သည်လည်းကောင်း ၊ ပုတိဌာန ရှိ အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ သဘာဝများ ဖြစ်ကြောင်း ရိပ်စားမိကြပါလိမ့်မည်။
ဟူသည်မှာ အတိတ်ကံအရ ပါရှိလာသော အခြေခံ ကံအကြောင်းအကျိုး သဘောတရားတို့ကို ဖော်ပြ ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ မိမိတို့ မှည့်ခေါ်လိုက်သော အမည်ဟူသည်မှာ ထို…အကြောင်းအကျိုး အကောင်း အဆိုးတို့ ထဲမှ မည်သည့် ကံတရားမျိုးနှင့် တည့်တည့်တိုး ရင်ဆိုင် ရနိုင်သနည်းဟူသည့် အချက်ကို ဖော်ညွှန်းသည်။
ဥပမာဇာတာရှင် မောင်သက်ဦးသည် တနင်္ဂနွေ အထွန်းဌာနတွင် ရပ်တည်နေသော ဖွားဇာတာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်၏။ သူသည် သောကြာသားအဓိပတိဖွားလည်း ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် အလုပ်ပြုတ်သည့်ကံ ပါလာ၏။ ပိုမို သေချာလာခြင်းမှာ …သူသည် ထိုတနင်္ဂနွေ ( အ ထွန်း) ဖြင့်ပင် နာမည်အဖျားစာလုံးကို မှည့်ခေါ်လိုက်၏။ တနည်းအားဖြင့် အဆိုပါကံနှင့် တည့်တည့်တိုးရန် ပိုမိုအကြောင်းဖန် စရံသတ်လိုက်၏။ ထို့ထက် ရှင်းအောင် ဆိုရပါမူ …မောင်သက်ဦး ဟု မှည့်လိုက်ခြင်းကြောင့် အလုပ်ပြုတ်ကံ ဖြစ်၏။ မောင်သက်ဦးဟု မှည့်ခေါ်တွင်လာခြင်းကြောင့် ယခုအခါ ..အသက်ငယ်စဉ်မှာပင် ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်း အရိုးအဆက် နေရာတွင် အရိုးကြေးပေါင်းတက်ရောဂါ ဖြစ်တည်ခံစားလာရ၏။ မောင်သက်ဦးဟု မှည့်ခေါ် လိုက်ခြင်းကြောင့်ပင်လျှင် ဖခင်နှင့် ဆရာသမား တို့ထံမှ လုပ်ငန်းအမွေ ကိုလည်း ဆက်ခံခွင့်ရရှိပြန်၏။ မောင်သက်ဦးဟု ….အမည်သညာ ခေါ်တွင်ခြင်းကြောင့် ပင်လျှင်……………………………………………………………………………….။
အမည်များတွင် ကျွန်တော်တို့၏ ဘ၀ပုံရိပ်များ ထင်ဟပ်နေကြ၏။ တစ်ချို့သော ပုံရိပ်များကား လှပ တင့်တယ် ရှုစဖွယ်တည့်။ အချို့သော ပုံရိပ်များကား …အသွင်ပုံဆိုး …အကျည်းတန်ကြပြန်၏။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ….ကျွန်တော်တို့တွင် အနဲဆုံး အမည်တစ်ခု ဆီတော့ ပိုင်ဆိုင်နေကြသည်သာ ဖြစ်လေသည်။
phone 01 618469
Posted by Sayarphone at 5:15 PM Labels: မဟာဘုတ်
နိုင်ငံရေးဗေဒင် စာစု (၂)